Tottenham ayaa waligeed guul ku gaadhin ciida Spain ee lagu qabanayo finalka Champions League waxayna ku leeyihin 3 guuldaro iyo 3 barbaro ah.
Liverpool waxay Spain ku soo guulaystay 7 jeer, 6 guuldaro ayaa sidoo kale ku soo gaadhay iyo 5 barbaro ah waxaana ugu danbaysay guuldaradii kulankii lugtii hore ee Champions League ee ay Barcelona kala soo laabteen.
Liverpool ayaa rekoodh guuldaro la’aan ah ka soo hasyatay shantii kulan ee ugu danbeeyay ee tartamada kooxaha Yurub ee ay ka hortimid kooxaha Ingiriiska waxayna Reds soo heshay 3 guulood iyo 2 babraro ah iyada oo Man City guuldaro 3-0 ah ku baday Anfield halka ay 2-1 ku badeen kulankii Etihad Stadium ee xili ciyaareedkii hore.
Guud ahaan Liverpool ayaa 20 kulan kooxaha Ingiriiska kula ciyaartay tartamada Yurub waxayna soo guulaysteen 7 ka mid ah halka 8 kulan ay barbaro ku dhamaadeen waxayna Reds kooxaha Ingiriiska ee kulamadii Yurub kala kulantay 5 guuldaro oo kaliya.
Miyay Liverpool Iyo Tottenham Hore Iskugu Arkeen Kulamo Tartanka Kooxaha Yurub Ah?
Finalka Champions League ee Liverpool Vs Tottenham
Kulankii lugtii hore ee afar dhamaadkii UEFA Cup waxaa Liverpool faa’iido u soo horseeday Alec Lindsay kaas oo gool u soo saxiixay laakiin Tottenham waxaa kulankii lugtii labaad laba gool u dhaliyay a Martin Peters balse waxaa rajadii Spurs dilay Steve Heighway oo Liverpool u saxiixay goolka labaad ee sharci ahaan ay ugu soo baxeen finalkii UEFA Cup ee xili ciyaareedkii 1972/73.